Sidharth kumar Naqshada Dharka - Joornaalka Naqshadeynta
Khamiis 17 Bisha Lixaad 2021
Naqshada Dharka NS GAIA waa sumadda dharka dumarka casriga ah oo ka socota New Delhi oo hodan ku ah farsamooyinka naqshadeynta iyo dharka gaarka ah. Astaantu waa u doodda weyn ee wax soo saarka maskaxda leh iyo wax walboo baaskiil wadista iyo dib u warshadeynta. Muhiimadda qodobkaani waxaa lagu muujiyey tiirarka magacyada, 'N' iyo 'S' ee NS GAIA oo u taagan Dabeecadda iyo Joogtaynta. Habka NS GAIA waa “ka yar intaas”. Calaamaduhu waxay door firfircoon ka ciyaaraan dhaqdhaqaaqa moodada gaabiska iyagoo hubinaya in saameynta deegaanka ay yar tahay.
Magaca mashruuca : Sidharth kumar, Magaca naqshadeeyayaasha : Sidharth kumar, Magaca macmiilka : NS GAIA.
Dharka, dharka iyo nashqada dharka
Naqshada Dharka Sidharth kumar Sidharth kumar